Mpanamboatra sy mpamatsy fako vita amin'ny fako any China | Leadpacks
Ny kitapo fako tsy misy compostable without
Ny kitaponay sy ny fitaovana fako maloto azo nohamarinina toy ny compostable mifanaraka amin'ny fenitra eropeana EN 13432. Amin'ny alàlan'ny fampiasana kitapo amina fitaovana milamina amin'ny tontolo iainana dia asehonao amin'ny tontolo ivelany sy ny mpanjifanao fa manana profil maintso ianao ary manohana ny fampandrosoana maharitra.
Raha mila kitapo fako misy compostable ianao miaraka amina endrikao sy sary famantarana anao, afaka manampy ny Leadpacks. Izahay dia manome ny kitapo amin'ny habe, endrika ary hateviny samy hafa mifanaraka amin'ny filàna rehetra. Afaka manampy logo, sary na hafatra mifantoka amin'ny mombamomba antsika izahay. Ny kitapo mihodina biodegradable dia natonta amin'ny loko 4 amin'ny lafiny roa.
Ny fiainana talantalana fako vita amin'ny fako dia 10-12 volana.
Anaran-javatra Kitapo fako
Application Fako / Recycle, sns
Izahay izao dia manatri-maso fahalianana mitombo amin'ny fampihenana ny fampiasana plastika nentim-paharazana, na an'ny mpanjifa, indrindra fa ny mpanao politika koa. Firenena maromaro no efa nampiditra fandrarana ankapobeny ny harona plastika. Miparitaka erak'izao tontolo izao io fironana io.
Ny kitapo an'ny Leadpacks ao anaty akora 100% biodegradable sy compostable dia afaka mandray anjara amin'ny mombamomba ny orinasa ary manampy amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana. Amin'ny feon'ny fieritreretana tsara dia azonao atao ny mampiasa ilay kitapo fako ho zezika na inona na inona tanjona ary hanary azy ireo aorian'ny fampiasana azy.
Ny kitapo fako azo zezika dia mifototra amin'ny ampahany lehibe amin'ny loharanon-karena azo havaozina avy amin'ny akora fototra avy amin'ny zavamaniry. Midika izany fa kely kokoa ny CO2 dia alefa any amin'ny habakabaka, satria ny zavamaniry dia mandray ny CO2 rehefa mitombo izy ireo, ka tsy misy akony firy amin'ny tontolo iainana noho ny fanaovana plastika miorina amin'ny solika.
Previous: Kitapo fisaka azo ovaina
Kitapo fako tsy azo ovaina